15 Zvino Erifazi muTemani akapindura, akati: 2 “Munhu akachenjera angapindura nezivo isina zvainobatsira here,+Kana kuti angazadza dumbu rake nemhepo yokumabvazuva here?+ 3 Kungotsiurawo zvako neshoko hakuzobatsiri,Uye kungotaurawo zvako hakuzobatsiri. 4 Zvisinei, iwe unoita kuti kutya Mwari kushayiwe simba,Uye unoita kuti kufungisisa nezvaMwari kwose kuderere. 5 Nokuti kukanganisa kwako kunodzidzisa muromo wako,Uye unosarudza rurimi rwevanhu vane njere. 6 Muromo wako ndiwo unokuti wakaipa, kwete ini;Uye miromo yako ndiyo inokupomera.+ 7 Ndiwe munhu akatanga kuberekwa+ here,Kana kuti wakaberekwa nemarwadzo okusununguka, zvikomo+ zvisati zvavapo here? 8 Unonzwa zvakavanzika zvaMwari here,+Uye ndiwe woga une uchenjeri here? 9 Chii chaunoziva iwe chatisingazivi?+Chii chaunonzwisisa iwe chatisinganzwisisiwo? 10 Kwatiri kune munhu achena musoro nomunhu akura,+Ane mazuva mazhinji kupfuura baba vako. 11 Kunyaradzwa kwaunoitwa naMwari hakuna kukwana here,Kana kuti shoko rinotaurwa kwauri nounyoro here? 12 Mwoyo wako unoitirei kuti iwe uzvikudze,Uye maziso ako anobwairirei? 13 Nokuti unoita kuti simba rako roupenyu rirwisane naMwari,Uye wakaita kuti mashoko abude mumuromo mako. 14 Munhuwo zvake chii kuti ave akachena,+Kana kuti munhu akaberekwa nomukadzi kuti ave akarurama? 15 Tarira! Iye haatendi muvatsvene vake,+Uye matenga pachawo haana kuchena pamberi pake.+ 16 Zvino zvakadini nomunhu anosemesa uye ane uori,+Murume anonwa zvinhu zvisina kururama semvura! 17 Ndichazvizivisa kwauri. Nditeerere!+Izvi ndakazvionawo, saka rega ndizvirondedzere, 18 Zviya zvinotaurwa nevanhu vakachenjera+Uye zvavasina kuvanza, zvakabva kumadzibaba avo. 19 Ivo voga ndivo vakapiwa nyika,Uye hapana mumwe munhuwo zvake akapfuura nepakati pavo. 20 Munhu akaipa anongotambura mazuva ake ose,Iwo makore akachengeterwa mudzvinyiriri. 21 Kurira kwezvinhu zvinotyisa kuri munzeve dzake;Mupambi anouya kwaari paanenge ari murugare.+ 22 Haatendi kuti achadzoka achibva murima,+Uye anochengeterwa bakatwa. 23 Anodzungaira achitsvaka zvokudya achiti—zviri kupi?+Anonyatsoziva kuti zuva rerima+ rava pedyo naye. 24 Kutambudzika nokurwadziwa zvinoramba zvichiita kuti atye;+Zvinomukunda sezvinoita mambo akagadzirira kurwisa. 25 Nokuti anotambanudza ruoko rwake kuti arwe naMwari,Uye anoedza kuzviita mukuru kune Wemasimbaose;+ 26 Nokuti anomhanya kunorwisana naye akaomesa mutsipa,Aine makwande makobvu enhoo dzake; 27 Nokuti anofukidza chiso chake nokukora kwakeUye anoisa mafuta muchiuno make,+ 28 Iye anogara mumaguta anofanira kubviswa;Mudzimba dzisingazorambi dzichigarwa nevanhu,Dzakatemerwa kuti dzichava mirwi yematombo. 29 Haazopfumi uye pfuma yake haizowedzeri,Uyewo haazoparadziri zvavakawana panyika.+ 30 Haazobvi parima;Murazvo womoto uchaomesa davi rake,Uye achabviswa nemhepo yomuromo wake.+ 31 Ngaarege kutenda zvisina zvazvinobatsira, achitsauswa,Nokuti mubayiro wake waachawana zvinhu zvisina zvazvinobatsira; 32 Zvichaitwa zuva rake risati rakwana.Nhungirwa yake haizokuri kwazvo.+ 33 Achazunzira kure mazambiringa ake asina kuibva sezvinoita muzambiringa,Uye achadonhedza maruva ake sezvinoita muorivhi. 34 Nokuti ungano yevatsauki haibereki,+Uye moto uchaparadza matende evanoita zvepfumbamuromo.+ 35 Kune kubata pamuviri pedambudziko nokuberekwa kwezvinhu zvinokuvadza,+Uye dumbu ravo rinogadzirira kunyengera.”